बुद्ध एयरको विमानभित्र तनावका २ घण्टा : ‘ढोका खोल्दिनुस्, हाम्फाल्छौं’ भन्दैथिए यात्रु (भिडिओ) – Nepal Press
२०७८ असोज ११ गते १५:०७
काठमाडौं । सोमबार बिहान काठमाडौंबाट विराटनगर उडेको वुद्ध एयरको विमान प्राविधिक समस्याका कारण विराटनगर विमानस्थलमा ल्याण्ड हुन नसकी काडमाडौंमा आएर अवतरण गर्‍यो । यसक्रममा जहाजले झण्डै १० पटकसम्म आकाशमै फन्को मारेको थियो ।
उडिरहेको विमानभित्र सामान्य समस्या आउँदा पनि त्यसलाई निकै संवेदशनशील मानिन्छ । एक-पटक, दुई पटक होइन पटक-पटक ल्यान्ड गराउने प्रयास असफल भएपछि विमानमा सवार यात्रुहरू अत्तालिनु स्वभाविक थियो । केही यात्रु रुन कराउन थालिसकेका थिए । एयरहोस्टेसहरूले उनीहरुलाई सम्झाउने प्रयास गरे पनि उनीहरु आफैं ‘नर्भस’ थिए ।
काठमाडौंबाट केही मिनेटको यात्रापछि विराटनगर ओर्लनुपर्ने यात्रुहरू दुई घन्टासम्म आकाशमै रहे । त्यो बेला उनीहरूको मनोदशा पक्कै सहज भएन ।
एक यात्रु भन्छन्, ‘मैले त बाँच्ने आशा नै मारिसकेको थिएँ ।’
काठमाडौंबाट विराटनगर उडेको जहाज कलसाइन ९ एनएएनटीआई विमानभित्र वयस्क ६८, र बच्चा ५ जना गरी ७३ यात्रु सवार थिए । विमान काठमाडौंमा फर्केर सुरक्षित अवतरण गरेपछि बल्ल उनीहरूले सन्तोकको सास फेरे ।
बुद्ध एयरका अनुसार जहाज विराटनगर अवतरण गर्ने क्रममा ल्याण्डिङ गियर इन्डिकेटरमा समस्या देखिएको थियो । टावरले पनि गियर नझरेको जानकारी दिएपश्चात् जहाजलाई क्याप्टेनले पुनः काठमाडौं फर्काउने निर्णय गरेका थिए ।
काठमाडौं आउनेबेलासम्म मलाई त केही भएको थिएन, ढुक्क नै थिएँ । अब जहाज अवतरण हुन्छ होला भन्ने भयो । तर, काठमाडौं आएपछि पनि जहाज ८/१० पटक घुमाएको घुमाइ गर्दाखेरी चाहिँ मनमा चिसो लाग्न थाल्यो । बाहिर हेर्दा नेपाली सेनालगायत सुरक्षाकर्मी रेडि पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि चाहिँ जिन्दगी यति नै रहेछ जस्तो लाग्यो ।
जहाजमा ल्याण्डिङ गियरका लागि दुईवटा इन्डिकेटर रहेको हुन्छ- प्राइमरी र सेकेन्डरी । प्राइमेरी इन्डिकेटरमा संकेत नदेखिएको तर सेकेण्डरी इण्डिकेटरमा सबै ठिकठाक रहेको देखिएको थियो । यसरी सेकेण्डरी इन्डिकेटरमा बत्ती बलेको अवस्थामा पनि ल्याण्डिङ गियर खुलेकै मानिन्छ ।
‘सुरक्षामा शून्य सहनशीलता’ को सिद्धान्तअनुसार क्याप्टेनले जहाज तुरून्तै काठमाडौंमा फर्काउने निर्णय लिए । काठमाडौं आकाशमा आइसकेपछि क्याप्टेनले बुद्ध एयरको टेक्निकल टिमको रेडियो सम्पर्कमा ल्याण्डिङ गियर चेकजाँच गर्दा सही र झरेको जानकारी दिएका थियो ।
सुरक्षा निर्देशिका अनुसार जहाजमा रहेको इन्धनलाई कम गर्न केहीबेर काठमाडौंको आकाशमा फन्को मारी पाइटलले सुरक्षित अवतरण गराएको बुद्ध एयरले जनाएको छ ।
सम्भावित दुर्घटनाको खतरा बुझेर नेपाल प्रहरी, नेपाल सैनिक, नागरिक उडड्डयन प्राधिकरण, अग्नि नियन्त्रक टोली सुरक्षित अवतरणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको थियो । जहाजभित्रका यात्रुहरू त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रहरी र एम्बुलेन्स देखेपछि झन् आत्तिएका थिए । बुद्ध एयरले यात्रुमा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा मागेको छ ।
यात्रुको बयानः ‘ढोका खोल्दिनुस्, हाम्फाल्छौं’ समेत भन्यौं
बिराटनगरमा ल्यान्ड हुन नसकेपछि हामीले सोध्दा प्लेनमा थोरै समस्या निस्किएको छ भनियो । त्यहाँ क्याप्टेन साहेवले धेरै दुःख गर्नु भयो । ६/७ पटक नै प्रयास गर्नु भयो तर सक्नु भएन । फेरि काठमाडौं ब्याक गर्नु भयो ।
काठमाडौं आउनेबेलासम्म मलाई त केही भएको थिएन, ढुक्क नै थिएँ । अब जहाज अवतरण हुन्छ होला भन्ने भयो । तर, काठमाडौं आएपछि पनि जहाज ८/१० पटक घुमाएको घुमाइ गर्दाखेरी चाहिँ मनमा चिसो लाग्न थाल्यो । बाहिर हेर्दा नेपाली सेनालगायत सुरक्षाकर्मी रेडि पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि चाहिँ जिन्दगी यति नै रहेछ जस्तो लाग्यो । यो प्लेनमा दुर्घटना हुन्छ नै भन्ने भयो ।
जहाजभित्र रुवाबासी नै चलेको थियो । हामीले त ढोका खोल्दिनुस्, हामी हामफाल्छौं समेत भन्यौं । तर, एयरहोस्टेज धेरै राम्रो हुनुहुँदो रहेछ । उहाँहरुले नआत्तिनुस्, तपाईंहरूलाई बचाउने सक्दो प्रयास गर्छौं भन्नु भयो । फ्यूल माथि सकेर तल पानी राखेर फर्म ओछ्याएर सेफ ल्याण्डिङ गर्छौं भन्नुभएको थियो । फ्यूल सकेपछि आगो लाग्दैन भनेर हामीलाई भनिरहनु भयो ।
त्यसपछि क्याप्टेनले लास्ट एकपटक ट्राइ गर्छु भन्नु भयो । र, सेफ ल्याण्डिङ भयो । मान्छेहरु १/२ जना बेहोस पनि भए । त्यो अवस्थामा जस्तोसुकै मुटु दरो भएको मान्छे पनि कमजोर बन्छ । एयरहोस्टेसको आँखामा पनि आँशु आएको देख्न सकिन्थ्यो । आजको यात्रामा हामी सफल भयौं ।
मैले त घरमा म्यासेज गरिसकेको थिएँ, यति नै रहेछ भनेर । बाँचे भने भेटौला, मर्‍यो भने यति नै भनेर ।
प्रकाशित: २०७८ असोज ११ गते १५:०७
साधना महिला विद्यालयः जहाँ १२५ आमा-हजुरआमा अध्ययन गर्छन्
कपिलवस्तुको चार पालिकामा फैलियो झाडापखाला
दुःखीलाई मलहम लगाउँदै टीकटककी ‘भगवान’ !
हाँडीगाउँकाे जात्रा ! (तस्बिरहरु)
वर्षाले २ लाख हेक्टरको धान सोत्तर, जीडीपीमा धक्का पुग्न सक्ने
विदेश हिँडेका पाइला मोडेर कागतीखेती, मासिक ५० हजार आम्दानी